Maqaallada ku saabsan Boqortooyada Midowday
Steamer wajiga ugu fiican UK
April 21, 2021 Karuna Chandna UK, waxyaabo waxtar leh
Maqaarkayagu waa inuu wax badan u dulqaataa, gaar ahaan London. Uumiyaha wejiga waa hab fiican oo looga takhaluso maqaarka wasakhda, dufanka, iyo qurxinta. Taasi waxay ku uruurtaa unugyada waqti ka dib waxayna keentaa dhibco iyo madax madow.
Feejignaanta farta fiican ee UK
April 20, 2021 Maitri Jha UK, waxyaabo waxtar leh
Inbadan oo naga mid ah weligood ma maqli lahayn qiyaasta wadnaha garaaca wadnaha haddii aysan ahaan lahayn COVID dillaaca adduunka oo dhan. Kuwa kale, laakiin, waxaa laga yaabaa inay un ku adeegsadeen qaybtaan yar isbitaalada. Waa maxay saxanka garaaca wadnaha?
Buugaagta ugufiican ee ay tahay inaad aqriso kahor intaadan dhiman UK
April 15, 2021 Antika Kumari UK, waxyaabo waxtar leh
Nolosha, waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid, waxyaabo ay tahay inaad sameyso, iyo waxyaabo ay tahay inaad sameyso. Qaybahan isku midka ahi waxay khuseeyaan xulashadaada buugga aad akhrinaysid xiga. Waxaad akhrin kartaa buugaag tiro kasta, sababo u dhexeeya raali ahaanshaha dambi ilaa xaqiiqda taas
Qalabka muusikada ee bilowga ah UK
Muusikada ayaa qancisa nafta. Waxaa loo isticmaalay in lagu soo gudbiyo dareenno aan ereyada kaligood qeexi karin. Muusikada ayaa ifineysa noloshaada markaad safar dheer kujirto, tareenka ku caajiso, markaad shaqeyneyso. Ku ciyaarida qalabka muusikada waa mid aan dhamaanayn
1 2 3 ... 6 Xogta ku xiga»